जनउत्थानको एजीएम भयो सुरु, के-के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » जनउत्थानको एजीएम भयो सुरु, के-के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
काठमाडौँ - जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकको पनि आइतबार (पुस ३० गते) रोज पार्टी प्यालेस कालिका नगर, बुटवलमा ११ बजेदेखि साधारण सभा सुरु भएको छ । सभामा कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट २०% बोनस र १.०५% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव लैजानेछ । जनउत्थानले ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस र कर तिर्न २ लाख ५२ हजार ६३१ रुपैयाँ नगद दिन लागेको हो ।
यो लघुवित्तले बोनसपछि कायम हुने चुक्त पुँजी २ करोड ८८ लाख रुपैयाँको १००% हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्दैछ । यसैगरी, कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ करोड ४० लाखबाट १० करोड रुपैयाँ पुर्याउने विशेष प्रस्ताव पनि एजीएममा लागिंनेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तैमाससम्ममा जनउत्थानको चुक्ता पुँजी २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ५१.६७ (वार्षिक) रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ २१३.५६ रुपैयाँ छ ।